Kuthetha ukuthini ukuphupha ikati? Fumanisa i-Intanethi ▷ ➡️ kwi-Intanethi
Ukuphupha ikati kunokuba neentsingiselo ezininzi. Konke kuxhomekeke kwindlela ophuphe ngayo. Ikati inokumela ukuzimela, ukuzimela, inkanuko, ukulinganisela kunye nokukwazi ukufunda. Le kati ibonakalisa umanyano phakathi komzimba nomoya.
Kwi-Egypt yakudala wayede anqulwe njengoThixo, kodwa ke umlingo wajika wamhlangula umlumbi kwaye watshutshiswa kwi-Middle Ages kuba wayenxulunyaniswa namagqwirha.
Ukuphupha ikati kunokuchazwa ngeendlela ezininzi kwaye kuya kuxhomekeka kwindlela ebonakala ngayo ephupheni lakho, ukuba limnyama, linoburhalarhume, lingwevu, limhlophe, phakathi kwabanye ...
Ukulungele ukufumanisa ukuba lithetha ntoni eli phupha kunye nezinto ezahlukeneyo ezinokubakho?
1 Intsingiselo yokuphupha ngekati (ngokubanzi)
2 Ukuphupha ikati ebalekayo
3 Ukuphupha ikati elilumayo
4 Ukuphupha ikati efileyo okanye ikati engwevu
5 Iphupha lekati elimnyama
6 Iphupha lekati emhlophe
7 Iphupha lekati etyheli
8 Iphupha lekati
9 Iphupha malunga neKati enobukrakra
10 Iphupha lekati emathangeni akho
11 Iphupha lekati eligulayo
12 Ukuphupha ikati ingqisha / ingxola
Intsingiselo yokuphupha ngekati (ngokubanzi)
Ngokubanzi, ukuphupha ikati kuthetha into embi, oko kukuthi, imeko elusizi kakhulu iyacwangciswa, edla ngokunxulumene nokungcatsha, ukungathembeki okanye nokungabikho kwenkxaso ngexesha elinzima.
Kodwa musa ukothuka ngoku, kusenokubakho iimeko ephupheni ngokwalo ezinokuthomalalisa okanye zitshintshe loo miqondiso.
Ukuphupha ikati ebalekayo
Umzekelo, ukuba ephupheni ubona ikati okanye iikati zibaleka, oko kuthetha ukuba kufuneka uzikhusele ekungcatshisweni. Ukuba ephupheni ikati ikusongele, oko kubonisa ukuba kufuneka ulumke, kungenjalo uba semngciphekweni wokuba nengxabano yosapho enobundlobongela.
Kukuwe ukuba utolike okwenzekayo ebomini bakho ngoku.
Ukuba uphupha uphulula ikati, oko kuthetha ukuba unomdla onamandla kakhulu kumntu ohlala kunye yonke imihla, kodwa ukuba uphupha ukuba iikati ziyalwa, oko kuthetha ukwahlukana ngothando.
Ukuba endaweni yoko, uphosa ikati ephupheni lakho, yazi ukuba kulungile, kuba oko kuthetha ukuba uya kuba noloyiso olukhulu kwizizathu zomthetho.
Ukuphupha ikati elilumayo
Isilumkiso! Eli phupha liza njengesilumkiso. Kuthetha ukuba umntu omthembileyo kakhulu, isizalwane okanye umhlobo wakho angakuxokisa okanye alungiselele "ukukuluma". Kwimeko apho ukrokrela umntu, hlala ulumkile ...
Ukuphupha ikati efileyo okanye ikati engwevu
Ukuba uphupha ikati efileyo, kungcono, kuba oko kuthetha ukuba uya kuphumelela umlo nxamnye notshaba olunamandla. Kodwa lumka, ukuba uphupha ikati ileqa imouse, kuba sisilumkiso sengozi esondeleyo kunye nokuphazamiseka okunzulu.
Iphupha lekati elimnyama
Amaphupha ethu ahlala asizisela imiyalezo enokuba ilungile okanye imbi, kodwa uninzi lwamaphupha luhlala lulungile.
Ngaphandle kokuphupha ikati emnyama, akunjalo. Ikati emnyama sele izisa inkolelo iyodwa, kwibali lookhokho bethu njengebali lethamsanqa kwiikati ezimnyama. Ukuphupha ikati emnyama kuthetha ilishwa, ithamsanqa elibi kakhulu. Ikati emnyama isenokungabi luphawu olulungileyo kumaphupha amaninzi.
Iphupha lekati emhlophe
Ukuphupha ikati emhlophe kunokuba luphawu lokuba uyathandana nomntu. Nokuba sele ulwalamano olunothando, kuya kuqinisekisa kuphela ukuba uziva luthando lokwenene kwiqabane lakho okanye kwisoka lakho.
Ukuba awutshatanga, inokuba sisityhilelo esinokwenzeka kungekudala okanye sele senzekile kwaye awukaboni oko.
Njengoko benditshilo ngaphambili, usenokuba uyathandana kwaye awukayiqondi okwangoku. Cinga ngabahlobo bakho kwaye ukuba kukho umntu okwenza uzive ukhethekile okanye wahlukile. Soloko ucinga ngocoselelo phambi kokwenza nasiphi na isigqibo malunga noku, musa ukwenza izinto ngentloko yakho emoyeni. (ukuze ungonakalisi ubuhlobo bokwenene.)
Inokumela ukuchuma ebomini bakho ngayo yonke indlela.
Iphupha lekati etyheli
Ukuba uyaphupha ngayo, luphawu lokuba uncanyathiselwe kwimpahla enjengemali, iimpahla, indlu, phakathi kwabanye. Imali yeyona nto ixhaphakileyo kuzo zonke. Sukubandakanyeka kwizinto ezingenamsebenzi, ezona mvakalelo kunye nezona zinto zilula ebomini obukunika zona zihlala zimnandi ngakumbi kunokuba unamathele kwizinto eziphathekayo. Ycinge.
Ukuphupha iinjana kunokuba ngumqondiso ombi. Unokufumana ukugula kwixesha elizayo. Kungoko kungcono ukuba uqaphele ngempilo yakho kwaye ungoyiki, kuba nangona kukho ubunzima onokuthi uziva, uya kuyoyisa imiqobo yakho.
Iphupha malunga neKati enobukrakra
Ukuba uphupha ikati enoburharha, inokubonisa ukuba uneengxaki zothando ezingasonjululwanga. Ngaphambi kokuba uqale ubomi obutsha, nokuba uwedwa okanye unothando olutsha, coca ixesha lakho elidlulileyo. Sukushiya nantoni na ingasonjululwanga, kuba kunokwenzeka ukuba ixesha lakho elidlulileyo linokonakalisa yangoku xa lisonjululwe kakubi.
Inokufana nokuzalwa ngokutsha, kodwa ngokuzola kunye nokuzimisela okukhulu konke kuya kulunga.
Iphupha lekati emathangeni akho
Eli phupha lintsonkothile ukutolika, kodwa ngokubanzi lifanekisela ukuba ungahamba isigaba esiphosa uthando, uthando, ukuthanda ...
Ukuba uziva nyani kwaye uphuphe ikati ethangeni lakho, ungalahli ithemba, kuba le iya kuba yinto yethutyana. (Akukho xesha liza kudlula apha).
Iphupha lekati eligulayo
Ukuba ephupheni ikati ibikhasa, yonzakele okanye iyagula, inokubonisa ukuba ihamba ngomzuzu ombi ebomini bayo. Banokuba kukudana kothando okanye nokuhlekisa okungalunganga. Yima kwaye ubonakalise isimo sakho sengqondo kwaye ungenzi naziphi na izigqibo ngokulula.
Ukuphupha ikati ingqisha / ingxola
Ukuba uve ikati idla, oko kuthetha ukuba unabahlobo bobuxoki abakungqongileyo. Ukuba ikati iyangxola kakhulu, inokubonisa ukuba umhlobo wakho ebethetha kakubi ngawe emva kwakho.
Ewe amaphupha anokuchazwa ngeendlela ezininzi kuxhomekeke kwinto eyenzekayo ebomini bethu. Kuphela uya kuba nakho ukwazi ukuba kuthetha ntoni ngengcebiso enikwe apha.
Uyabona njani ukuba ukuphupha ikati ayisiyonto imbi? Kuya kufuneka uyazi indlela yokucacisa imiyalezo leyo iphupha elifuna ukukuhambisa.
Amaphupha am, Amaphupha
NgoSeptemba 17, 2020
NgoSeptemba 15, 2020
NgoSeptemba 14, 2020